Ciidamo ka Yimid Maamulka Somaliland oo Saldhigyo ka samaystay Taleex – Radio Daljir
Ciidamo ka Yimid Maamulka Somaliland oo Saldhigyo ka samaystay Taleex
Abriil 23, 2015 2:12 b 0
Khamiis, Abriil 23, 2015 (Daljir) — Ciidamada Somaliland ayaa maanta gaaray magaalada Taleex ee gobolka Sool; kaddib markii dagaal sababay dhimasho, dhaawac iyo barkac uu maalintii shalay ahayd ka dhacay degmadas, kaasoo u dhexeeyey laba beel oo wada-dega degmadaas.
Ciidanka gaaray Taleex oo ahaa kuwo aad u tiro badan ayaa waxay ka sameysteen saldhig dhigtay deegaan ku yaalla duleedka degmadaas, sida uu warbaahinta u sheegay Sheekh Maxamed Maxamuud oo ka mid ah culummada Taleex.
Sidoo kale, C/rashiid Xirsi Dalmar oo ah guddoomiye ku xigeenka gobolka Sool ayaa isna sheegay inay ciidamadan u tageen si ay ammanka degmadaas u sugaan.
\_”Ma ahayn ciidamadu duullaan ee waa kuwo doonaya inay wax ka qabtaan colaadda labada beelood u dhexeysa, waxaana rajeynayaa in waqti dhow ay guurti iyo wasiiro ka socda Somaliland hawshaasi u yimaadaan Taleex,” ayuu C/rashiid Dalmar u sheegay wariyayaasha.
Degmada Taleex ayaa dagan maanta; iyadoo ay jiraan waxgarad iyo madax-dhaqameedyo halkaas gaaray, kuwaasoo uu ka mid yahay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo maanta ku hawlanaa sidii xaalka loo danin lahaa.
Ugu dambeyn, barakac ballaaran ayaa ka dhacay degmada Taleex oo muddo sanad iyo bar ah ku dhow kasoo kabanaysay barakac faarujiyay magaalada markii ciidamada maamulka Puntland ay isku dhaceen dabley deegaanka ka tirsan; kaasoo sababay aafada colaadeed ee soo noq-noqonaysa.
Ciidamo ka goostay Maamulka Somaliland oo ku biiray Ciidamada Suldan Wabar
Midowga Afrika oo waxba kama jiraan ku tilmaamay kufsiga lagu Eedeeyay AMISOM